Kuchenesa Kwedu Vanyori Vedu Runyorwa Kuwedzera kwedu CTR ne183.5% | Martech Zone
Isu taigara tichishambadza pane yedu saiti yataive nayo vanopfuura 75,000 vanyoreri pane yedu email runyorwa. Kunyangwe icho chaive chokwadi, isu taive nenyaya inonetesa yekuendesa kwataive takanamatira mumafaira e spam zvakanyanya. Nepo vanyoreri makumi manomwe nemashanu vachitaridzika kwazvo kana iwe uchitsvaga vatsigiri veemail, zvinotyisa kwazvo kana nyanzvi dzeemail dzichikuzivisa iwe kuti havasi kuwana yako email nekuti yanga ichinamira mune zvisina tsarukano.
Iyi inzvimbo isina kujairika kuvemo uye ndakaivenga. Pasina kutaura nezvekuti isu tine maviri akasiyana emaemaema nyanzvi sevatsigiri - 250ok uye Usamborega. Ndakatotora mamwe kubvarura kubva kuna nyanzvi Greg Kraios muhurukuro yapfuura kwaakandideedza semunhu anosemesa.
Chakakosha padambudziko rangu chaive chokwadi chekuti vashambadziri vanotsvaga makuru mazita. Email rondedzero vanotsigira havabhadhare nekudzvanya-kuburikidza-chiyero, ivo vanobhadhara nekukura kwemazita. Nekuda kweizvozvo, ini ndaiziva kuti kana ndikachenesa rondedzero yangu, ini ndaizogezera pamari yekushambadzira. Panguva imwecheteyo, apo kusimudzira runyorwa rukuru kunokwezva vashambadzi, zvaive zvisiri kuchengeta vashambadzi vaitarisira kuwedzera kubatanidzwa.
Kana ini ndaishuvira kuve mushambadzi akanaka uye muenzaniso kune vateereri vangu, yaive nguva yekuita imwe yekuchenesa pane yedu tsamba yezuva nezuva uye yevhiki zvinyorwa:
Ini ndakabvisa ese maemail kero kubva kune angu zvinyorwa anga anga ari pane runyorwa rwe rakakura kupfuura gore rimwe asi harina kubvira ravhurwa kana kudzvanywa paemail. Ini ndakasarudza gore rimwe chete semuyedzo muchiitiko chekuti paive nemwaka wenguva apo vanhu vanogona kugara vachinyoresa, asi vaive vakamirira mwaka wavo kuti vaongorore tsamba yezvinyorwa zvine chekuita nazvo.
Ndakamhanya iro rakasara runyorwa kuburikidza neverbounce kuenda bvisa makero eemail ane matambudziko kubva pane angu rondedzero - mabhureki, anoraswa, uye macallall email kero.
Kuziva kuti ndaizogogodza kuverenga kwangu pasi zvakanyanya kwaityisa, asi kwakaguma nemimwe mhedzisiro mushure memasvondo maviri ekutumira tsamba dzedu.
Isu takabvisa pamusoro 43,000 vanyoreri veemail izvo zvatainge takaunganidza mumakore gumi apfuura uye isu tasara zvino nerunyorwa rwe makumi matatu nemaviri.
Yedu inbox yekuisa rate yakawedzera nekukwirisa 25.3%! Ndingadai ndisina kumbofungidzira kuti mangani maemail email anga ari kutidhonza pasi - ndinofara kuti Greg akandibata pamusoro pemusoro mubvunzurudzo iyi.
Nekuti isu taive tave muinbox, iyo yakavhurika mwero yakawedzera ne163.2% uye vedu tinya-kuburikidza chiyero ne183.5%!
Zvino, usati wati… zvakanaka, Douglas iwe wakangopatsanurwa nedhinomineta nyowani uye ndosaka uine iko kuwedzera. Kwete. Iyi ndiyo yaive delta pakati peyakare yakavhurwa mwero uye new yakavhurwa mwero, uye yekare CTR maringe new CTR. Dambudziko nerondedzero yedu raive rekuti paive nevazhinji vakanyoresa vasina basa.
Tichine mamwe maIPP ane matambudziko asiri kutiisa muInbox, asi makore akareruka kumberi kwataimbove! Isu tave kufunga kufunga kuvaka mutemo mune yedu email sevhisi iyo inongoerekana yaita izvi kuchenesa husiku hwese. Isu takawedzerawo mureza wakasarudzika wemazita edu embeu kuti vaone kuti havazombonatswa, nekuti havana kumbobvira vavhura kana kudzvanya paemail.
kuburitsa: 250ok uye Usamborega vese vari vaviri vanotsigira bhuku redu reMartech.
Tags: 250okkuburitswaemail ctremail kuburitsa mwerotenzi kuzvinyoresapurgeBvisakunyoresa purgeundelete